umshini wokuwasha - idivayisi ngaphandle kwalokho kakho umuntu akakwazi ukucabanga ngokuphila kwami. Ukuhluleka kwako kuba nemiphumela ebuhlungu. abanikazi abaningi babhekana nenkinga uma ungenawo ukuvula umnyango umshini wokuwasha. Le nkinga ivame kakhulu kubonakala ekupheleni ukugeza. Okufanele ukwenze esimweni esinjalo? Akuwona wonke umuntu ulwazi oluthile ukuze ngokushesha ukubhekana lo ukungasebenzi. Ukwenza nezinkinga ezimbalwa. Kungenjalo, ungaxhumana sesevisi, kodwa kuthatha isikhathi esiningi futhi izingubo zakho izoqhubeka ibe sigubhu. Nokho, zikhona nezinye izindlela, ezichazwe kulesi sihloko.
Into yokuqala udinga ukuqonda uma ungenawo ukuvula umnyango umshini wokuwasha - ne iphutha kubangela. Cabanga ayinhloko:
deadlocks ihlelwa. Lokhu kukhetha kuzo zonke umshini. It yenzelwe ukuvikela. Ngokwesibonelo, uma umnikazi efuna ukuvula umnyango futhi umshini namanje ngeke kabusha amanzi, kungaholela ukuvuza engadingeki.
Ukuvinjwa ikhubaziwe emva ukuwasha. I Onjiniyela ozinikezele isikhathi esithile ngemva kwalokho lock ivulekile. Kwezinye onobuhle lock ikhishwe emva kwemizuzu 1-2, kuyilapho abanye bengase ithathe isikhathi esijana kunazo.
Isofthiwe nenkinga. Uma ngesikhathi ukugeza kuvaliwe ukukhanya, umshini ukhahlela iphutha ukuthi ngeke akuvumele ukuvimbela ukuvala umnyango. Kungokufanayo nangokuzihlanganisa zenzeka lapho ekunqanyulweni namanzi.
Ukulimala yokuvala. Ngokuvamile, lokhu kuholela block bafake. Ukuhlenga kudingeka nje esikhundleni esisha.
Amanzi ngeke akhanywa. Imbangela ye-ukungasebenzi kuyinto ukuvaleka hose abakhwabanisi.
Ukuvikelwa Kuvulwa kwezingane. Lolu hlelo lunikezwa ngenjongo yokuvikela.
Njengoba singabona kusukela izizathu ngenhla, ezinye ukwehluleka umnyango dweba zingaxazululwa ngaphandle kosizo ngaphandle. Iningi amaphutha kanye nezixazululo zabo zichazwe umenzi. On ezinye zazo, ake sixoxe khona manje.
It ahlahlele idivayisi umnyango yokuvala
umshini wokuwasha Broken? Ungavuli umnyango lapho ukugeza at efanele ukukhiya indlela? Udinga ukubheka iphutha kule ukukhiya. Lapho uhlelo uyehla zokugwema ukuphuka zedivayisi futhi idivayisi eletha akunasiginali, ngokulandelana, dweba ivaliwe. Ochwepheshe batusa ukuba ashintshe intelligence module firmware esimweni esinjalo. Do it ngokwakho ngaphandle nemishini ekhethekile akusebenzi, ngakho-ke kungcono ukubiza okuyinhloko oqeqeshiwe.
Le nkinga ejwayelekile sha "Indesit". umshini wokuwasha (ukuvula umnyango ngenxa yokwehluleka e electronics) wenze izinqubo ngokuzenzakalelayo, okungukuthi, lapho lock ikhiyiwe, emva ukuwasha ukuzwa ngokuchofoza, okusho yazisa ezingase umnyango livulwe. Uma lokhu kungenzeki, kubalulekile ukuhlola ezishintshayo. Nokho, umnikazi kufanele aqiniseke ukuthi inkinga kulo. Kunconywa ukuba uvule umshini futhi imodi "Yigeze" futhi "Spin." Uma ngabe le akuguquli isimo, awukwazi ukwenza ngaphandle ukulungisa.
namadreni Water - indlela ukuvula umnyango dweba?
Drain hose - kuyingxenye ebalulekile idivayisi ezifana umshini wokuwasha automatic. Ungavuli umnyango emva ukugeza, khona-ke amanzi ngaphakathi kweyunithi. Isizathu salokhu kungaba ukuvula isitamukoko. Kuphakama izinkinga ezifanayo lapho hose brokenfooted. amadivaysi Modern anemisila control ezihlakaniphile, ngakho lapho eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa zonke izinhlelo avimbelwe. Lokho amanzi angadingeki emva ukuwasha kungaholela kuwukwephula ukulandelana izinqubo okuhleliwe.
Okokuqala abanikazi kufanele uhlole hose abakhwabanisi for Kinks. Uma lokhu akunjalo, kuyobe sekudingeka ukwenze lokho ukuyihlanza. Izenzo ezinjalo kungaba kwenziwe nge tube emaphakathi, njengoba kukhona futhi ungakheka okuvimba ukuthi izinkinga ukudedelwa kwamanzi kusuka umshini.
Udinga ukuvula umshini wokuwasha e "Spin" Imodi ngemva uzingela ezindaweni inkinga nokuxazulula inkinga. Ekupheleni yokuvala ivaliwe futhi umnyango ayovulwa kalula.
"Isivikelo kwezingane" - Uhlelo ekuvimbeni
izimoto eziningi zanamuhla anemisila nohlelo olukhethekile, ukusebenza kwawo okungadingi ukuvula umnyango umshini wokuwasha. It yakhelwe ukuqinisekisa ukuthi abantu abagula ngokomqondo izingane asikwazanga ukusebenzisa lisebenze njengoba bakwazi bengazi bazigwaza ngowabo nabanye. Ukuze kusebenze Onjiniyela inketho yokuvala, inhlanganisela ekhethekile zemishini yokunyathelisa inkinobho (alikho igama elicacisiwe e imiyalelo). Uma uhlelo sivuliwe, okhiye angeke asebenze kahle. Futhi, uma noma iyiphi manipulation umnyango dweba akuyona evulekile. Ukuqeda block, umane ukukhubaza kwehlelo lokuvikelwa.
Ukulimala indlela yokuvala
Uma ungenalo ukuvula umnyango umshini wokuwasha, futhi ayivaliwe ke cishe, kwakukhona ukwehlukaniswa mshini yokuvala. izinkinga onjengalowo ungaholela iyunithi noma olunzulu bafake umthwalo isibambo. Iphutha akuphazamisi imodi ukungaqaliswa, ngakho isixazululo yayo liyadingeka ukususa umnyango. Ngemva kwalokho, thatha-ke ngaphandle bese uhlole isiqhebezo futhi yokuvala. Mshini ngokwayo ulula, ngakho ukukhanda ngeke bathathe isikhathi eside. Ngemva nokuqedwa zokugwema ukuphuka umnyango okumele iqoqwe, refit futhi ukuhlola iyunithi.
Umshini wokuwasha LG: kubangela ukulimala umnyango futhi indlela yokuxazulula
Musa ukuvula umnyango umshini wokuwasha LG? Zonke izizathu ngenhla kungabangela ukungasebenzi. Cabanga ngokuningiliziwe akunandaba mqondo, ngoba ulwazi oluningiliziwe isivele ezichazwe kulesi sihloko. Into kuphela ukuthi akusho ubuhlungu ukwazi umfundi - ikakhulukazi uhlelo "Ukuvikelwa kwezingane". I Onjiniyela abahlinzeke kusebenze yayo ngokucindezela "hashaza Super" inkinobho futhi "Oku-ukugeza". Uma kwenzeka ukhetho eyabizwa ngokuthi ngokhiye uyalingana. Ucishiwe Imodi ngokucindezela. Kufanele bese ucindezela "Qala" bese ukhetha uhlelo ukugeza oyifunayo.
Ukugeza Machine "Samsung"
Ungavuli umnyango phezu iyunithi inkampani Korean "Samsung" - yini okumele ngiyenze? Xazulula inkinga ngezindlela eziningana, okubaluleke - ukuze kutholakale imbangela. Ngokuvamile, emva kokuphothulwa ziwashwa Ilokhi Ilokhi ikhishwe kungakapheli imizuzu 5. Kodwa lapho sinqamukile imishini, akunakwenzeka ukungaqaliswa imodi. Kulokhu kutuswa ukuba uyeke lingakunika amandla iyunithi cishe imizuzu engu-30-40. Phakathi nalesi sikhathi, lolu hlelo luyoba kabusha wonke amasethingi, futhi umnyango lizovuleka. Lokho ngeke kwenzeke uma amanzi ahlale ngaphakathi emshinini. Khama ke, ungasebenzisa hose eziphuthumayo. Ukufinyelela kungenzeka kuphela ngembobo sise phansi izindlu. Uma konke amanzi akhishwa eziphethwini, Ilokhi kumele inqanyuliwe. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi lezi zinyathelo ngeke kuphela ukuvula dweba umnyango, kodwa musa ukulungisa imbangela yokuqala ukwehluleka.
Uketshezi kwe-ugwayi electronic Halo eyenziwe USA